Wararka Suuqa Kala Iibsiga: Fernandinho Oo Heshiis Cusub Saxiixaya, Sergio Ramos Oo Ku Biiraya Koox Cusub Iyo Qodo Kale
HomeWararka WargeysyadaWararka Suuqa kala iibsiga: Fernandinho oo heshiis Cusub Saxiixaya, Sergio Ramos oo ku biiraya koox Cusub iyo Qodo kale
June 18, 2021 Wararka Wargeysyada, Suuqa kala iibsiga 0
Tottenham ayaan ka dhigeynin Gennaro Gattuso tababarahooda xiga, sida ay qortay The Athletic .
Liverpool ayaa, sida laga soo xigtay Sport1 , kor u qaadeysa baacsiga Borussia Monchengladbach iyo ciyaaryahanka khadka dhexe ee xulka Jarmalka Florian Neuhaus. Sport1
Tottenham ayaa baari doonta xulashooyinka kale ee tababarenimo ee ka baxsan Gennaro Gattuso, sida uu warinayo Gianluca Di Marzio.
Manchester City ayaa qarka u saaran inay qandaraas cusub oo hal sano ah siiso Fernandinho, sida laga soo xigtay Daily Mail
Manchester United ayaa gudbisay dalab £ 50 million ($ 70m / € 58m) oo ay ku dooneyso daafaca dhexe Raphael Varane oo ay iska diiday Real Madrid, sida laga soo xigtay Manchester Evening News .
Manchester United ayaa cuqdad ka qabta Sergio Ramos heshiisyadii uu hore ula galay iyaga, Daily Mail ayaa qortay , mana eegi doonto saxiixiisa ka dib markii uu ku dhawaaqay inuu ka tagayo Real Madrid xagaagan.
Afar kooxood oo Serie A ah ayaa ceyrsanaya saxiixa goolhayaha Napoli David Ospina – sida laga soo xigtay Corriere Dello Sport .
Barcelona iyo Ousmane Dembele ayaa isku khilaafsan heshiis kordhinta ciyaaryahanka garabka ka ciyaara – sida ay qortay Marca .
Atletico Madrid ayaa ku sii dhawaaneysa saxiixa laacibka cajiibka ah ee kooxda Atletico River Plate Montevideo Matias Arezo – sida laga soo xigtay Ovacion Digital .
Arsenal ayaa u aqoonsatay ciyaaryahanka khadka dhexe ee Leicester City James Maddison inuu yahay bartilmaameedka suuqa kala iibsiga – sida ay qortay Football London .
Daafaca Manchester City Aymeric Laporte ayaa waxaa xiiseynaya Barcelona – sida ay qortay ESPN .
Sergio Ramos ayaa sheegay inuu damacsanaa inuu aqbalo dalabka Real Madrid ee ah hal sano oo dheeri ah laakiin loo sheegay inuu waqtiga ka dhamaaday. goal
Manchester United ayaan bixin doonin £ 20 million ($ 28m) si ay ula soo wareegaan daafaca midig ee kooxda Atletico Madrid Kieran Trippier, sida ay qortay BBC Sport .
Paris Saint-Germain ayaa isku diyaarineysa inay dalab labaad ka gudbiso daafaca Inter Achraf Hakimi, sida ay qortay FootMercato.
Lazio iyo Napoli ayaa xiriir la sameeyay Sead Kolasinac oo ku aadan suurtogalnimada uu ugu dhaqaaqayo Italy, sida ay qortay Calciomercato .
Real Madrid ayaa diyaar u ah inay dhageysato dalabyada u imaanaya Raphael Varane, sida ay qortay Cadena Ser.
Arsenal ayaa “riixeysa” inay gacanta kusoo dhigto xiddiga Rennes Eduardo Camavinga, sida ay warinayso Le 10 Sport.
Xiddiga Roma Leonardo Spinazzola ayaa xiiso ka helaya kooxaha Chelsea iyo Tottenham, sida ay qortay Express Sport.